China Popular uhlobo Fluidized-embhedeni Jet Mill ifektri abakhiqizi | Qiangdi
Singumkhiqizi wemishini yokucubungula impuphu.
Okubaluleke kakhulu, sinikeza ukwakheka okwenzelwe umshini, ubunjiniyela, bohlelo lokulawula ukuhlangabezana nezidingo zokukhiqizwa kwamakhasimende ethu. Singumhlinzeki wephrojekthi.
Sinikeza Isixazululo wokucubungula impuphu.
Isigayo seJet embhedeni we-Fluidized empeleni siyithuluzi elinjalo elisebenzisa ukugeleza komoya okuhamba ngesivinini esikhulu ukwenza uhlobo olomile lwensimbi olungcono kakhulu. Iqhutshwa ngumoya ocindezelweyo, impahla eluhlaza iyasheshiselwa ekuweleni kwemibhobho emine okufanele ithintwe futhi igaywe ngumoya ogeleza uye phezulu endaweni yokugaya, ithonywe ngamandla we-centrifugal nokugeleza komoya, i-powder kuze kufike esondweni lokugaya lizohlukaniswa futhi liqoqwe (okukhulu kakhulu izinhlayiya, amandla e-centrifugal aqinile; Izinhlayiya ezinhle ezihlangabezana nemfuneko yosayizi zizongena esondweni lokugreda bese zigobhozela kusihlukanisi sesishingishane bese ziqoqwa ngumqoqi.); enye impuphu iphindela emuva ekamelweni lokugaya ukuze kuqhutshekwe nokugaya okuqhubekayo.
Amanothi:Ukusetshenziswa komoya okucindezelwe kusuka ku-2 m3 / min kuze kufike ku-40 m3 / min. Amandla wokukhiqiza ancike ezinhlamvwini ezithile zento yakho, futhi angahlolwa eziteshini zethu zokuhlola. Imininingwane yamandla wokukhiqiza kanye nobuhle bomkhiqizo kuleli shidi kwenzelwe inkomba yakho kuphela. Izinto ezehlukene zinezici ezihlukile, bese kuthi imodeli eyodwa ye-jet mill izonikeza ukusebenza okuhlukile kokukhiqiza kwempahla ehlukile. Sicela uxhumane nami ukuthola isiphakamiso sobuchwepheshe noma izilingo ngezinto zakho.
Ithimba lethu lephrojekthi lisebenza ngokususelwa kulwazi oluningi lokuhlola olunemibiko engaphezu kuka-5000 yokuhlolwa kwezinto ezingaphezu kwe-1000 ezahlukahlukene ezivela ezimbonini zezimbiwa, izimboni zamakhemikhali, izimboni zokudla nezolimo, izimboni ze-pharma njll
Isingeniso senqubo yokuhlolwa komkhiqizo-lungisa ubuhle bemikhiqizo ngokuya ngemfuneko yamakhasimende
Qalisa ngqo imishini yohlelo lomthombo womoya.
Qalisa uhlelo lwe-PLC. Ngokulawula imvamisa yesondo le-classifer, lawula imikhiqizo'fineness.
Ukungeza okokusebenza okuluhlaza ekulayisheni i-hopper noma ukondla idivaysi.Umshini welebhu we-QDF-120, Singayisebenzisa indlela yokudonsa emoyeni ngokucindezela okungekuhle ukondla impahla; yemishini yokukhiqiza, okuphakelayo kwe-batch noma okuphakelayo kwesikhwama kuyatholakala ukwanelisa imfuneko ehlukile.
Ukuqoqa imikhiqizo eqediwe ngokuya ngezindlela zamakhasimende, Ungaqoqa ngqo imikhiqizo eqediwe ngamabhakede, noma uxhume kumshini wokupakisha.
1 .Akukho ukuphakama kwezinga lokushisa: izinga lokushisa ngeke lenyuke njengoba izinto zicutshungulwa ngaphansi kwezimo zokusebenza zokunwetshwa komoya futhi izinga lokushisa emgodini wokugaya ligcinwa livamile.
2. Akukho kungcoliswa: yonke le nqubo ayinakho ukungcola njengoba izinto zishukunyiswa ukuhamba komoya nomhlabathi ngokushayisana nomthelela phakathi kwabo ngaphandle kokubandakanya abezindaba. Ukuzisika ngokugcwele, Ngakho-ke Idivayisi ihlala isikhathi eside futhi ubumsulwa bemikhiqizo bukhulu kakhulu uma kuqhathaniswa.Ukugaya kukuhlelo oluvaliwe, uthuli oluphansi nomsindo, inqubo yokukhiqiza ehlanzekile nenobungani bemvelo.
3. Ukukhuthazela: Kusetshenziswe ezintweni ezinobulukhuni be-mohs ngaphansi kwebanga le-9, ngoba umphumela wokugaya ubandakanya kuphela umthelela nokushayisana phakathi kwezinhlamvu kunokushayisana nodonga. ikakhulukazi izinto ngobulukhuni obuphakeme, ubumsulwa obuphakeme nenani eliphakeme elengeziwe.
4.Ukukala uhlelo lokulawula, ukucacisa okuphezulu, ukukhetha, ukuzinza komkhiqizo okuphezulu.
Idizayini engakhethwa yokuqhuma, ingabuye ithuthukiselwe kusistimu yokusakazwa kwe-nitrogen ukuhlangabezana nezidingo zokucubungula kokugaya oku-ultra-fine kwezinto zokushisa nezokuqhuma ze-oxide.
5.Utholakale usayizi wezinhlayiyana D50: 1-25μm.Ukuma kwezinhlayiyana ezinhle, ukusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ezincane. I-rotor yokuhlela ephezulu yokunemba okuphezulu emhlabeni ehamba ngejubane kufika ku-80m / s, ukuqinisekisa ukunemba okuphezulu kwezidingo zomkhiqizo.Ijubane lesondo lilawulwa yisiguquli, usayizi wezinhlayiyana ungalungiswa ngokukhululeka. Isondo lokuhlukanisa lihlukanisa okokusebenza ngokuzenzakalela nokuhamba komoya, akukho zinhlayiya ezigqamile.Ultrafine powder umkhiqizo uzinzile futhi unokwethenjelwa.
6.Constant lokushisa noma lokushisa ongaphakeme, naphakathi-free ukugaya, ikakhulukazi efanelekayo izinto ukushisa ebucayi, ongaphakeme ukuncibilika iphuzu, ushukela, imvelo oluyingozi.
7.High energy ukusetshenziswa isilinganiso, ukukhuthaza ukugeleza impahla, ngcono powder ukuhlolwa kahle.
Izingxenye eziyisihluthulelo ezinjenge-liner yangaphakathi, isondo lokuhlukanisa nombhobho zenziwe nge-ceramic efana ne-aluminium oxide, i-zirconium oxide noma i-silicon carbide, iqinisekisa ukungathintani nensimbi kulo lonke ukugaya ukuhlanzeka okuphezulu kowokugcina.
Uhlelo lokulawula lwe-9.PLC, ukusebenza okulula.
I-10.Imoto ingaxhunywa ngebhande ukukhuphula isivinini futhi idlule enkingeni yama-motors asheshayo ngaphandle kohlobo lomoto owaziwayo.
Ingasetshenziswa ochungechungeni ngama-classifiers wezigaba eziningi ukukhiqiza imikhiqizo enosayizi abaningi ngasikhathi sinye.
Isigayo somoya se-QDF esine-fluidized singachoboza izinto ezilandelayo ezikhethekile ngaphezu kwezinto ezivamile.
Izinto eziqinile zobulukhuni: i-tungsten carbide, i-carborundum, i-aluminium oxide, i-silicon oxide, i-silicon nitride, njll.
Ubumsulwa obuphezulu: okokusebenza okuhle kakhulu, izinto zobumba ezikhethekile, njll
Shisisa izinto ezizwelayo: oplastiki, umuthi, i-toner, izinto eziphilayo, njll.
Imikhiqizo yethu isetshenziswe kakhulu ezimbonini ezingezansi.Manje sibe nemakethe evuthiwe emkhakheni wamakhemikhali wezoLimo. Kepha asikaze siyeke ukuphishekela kwethu ubuhle futhi sikwazi ukufunda amakhasimende ukuze siwanikeze insizakalo nezisombululo ezingcono
Olandelayo: Ukusetshenziswa Okukhethekile Kwe-Jet Mill Yombhede we-Fluidized In Hardness Materials